Falanqeyn ku saabsan waxqabadka wasaarada maaliyadda Soomaaliya – Kalfadhi
Falanqeyn ku saabsan waxqabadka wasaarada maaliyadda Soomaaliya
Wasaarad waa mid ka mida qaybaha ugu waaweyn ee taliska maamul u qaybsamo. Wasaaraduhu waxa ay laf dhabar u yihiin shaqada xukuumaddu qabaneyso. Wasaaradda Maaliyadda ee dowladada Federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan ee Qaranku leeyahay, waa wasaaradda maamusho dhaqaalaha dalka. Waxa ayna ka mid aheyd wasaaridihii ugu horeeyay ee la abuuray xiligii dowladii Daakhiliyadda. Inkastoo ay ka mid tahay hay’adaha dowliga ah ee sida weyn uu u saameyay bur-burkii dalka ku dhacay.
Wasaaradda ayaa ku tallaabsatay hormar la taaban karo sida uu sheegay wasiirka wasaaradda Maaliyadda Dr Cabdiraxman Ducalle Beyle ayaa dhowr mar ku cel-celiyey wax-qabadka wasaarada muddada yar ay xukuumaddu jirtay, isaga oo sheegay in wasaaraddu ay ka qeyb qaadatay koboca miisaaniyadda dawladda.
Sidoo kale, wasiirku waxa uu sheegay inay wasaaradda dhaqaale badan u keydisay dalka, qorsheyaal mustaqbalka miro-dhal noqon karana ay dejisay. Hadaba, maxaa ka run ah waxqabadka wasaaradda maaliyadda? Si aan wax badan uga ogaano waxqabadka wasaaradda maaliyadda, qormadan waxa ay fallanqeyn guud ku sameyn doontaa waxqabadka wasaaradda.
Miisaaniyadda sanadka 2018-ka ee uu Baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey bishii Disembar ayaa waxaa la socday dib u habeyn maaliyadeed oo ay xukuumaddu ku tallaabsatay markii ay soo gashay barnaamijka Hay’adda Lacagta Aduunka (IMF) bishii May, sida sarkaal IMF-ta ka tirsan uu u sheegay Reuters. Soomaaliya ayaa hadda ku jirtaa 12 bilood oo barnaamij kormeer ah kaas oo Hay’adda Lacagta Aduunku sameenayso si ay dib ulu soo laabato xubinimadeedii hay’adda, sidaa darteed raacitaanka qaab-dhismeedka maaliyadeed ee IMF wuxa uu albaabada u furayaa deeqaha iyo maalgashi caalamiga ah.
Maxamed Elhage oo hogaaminaya shaqada Hay’adda Lacagta Aduunka qeybteeda Soomaaliya ayaa warbixin ay qortay warbaahinta Reuters qaybteeda Afrika ku sheegay in laga soo bilaabo Sibteembar ilaa hadda ay arkaan ballanqaad adag oo dib u habeyn ah. Wasiirka Maaliyadda oo ka hadlayey munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumadda ayaa yiri siddatan “Wax yaabaha ugu waaweyn ee aan qabanay waxaa sal u ah geeddi-socodka deynta inagula leeyahay dhaafideeda iyo Baanka ama hay’ada la yiraahdo IMF-ta wax yaabaha ay inoo sheegeen in wadaddeedii la maro taasaa asal u ah maamul wanaagga.”
Dhanka kale, Abuukar Armaan oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda, dhaqaalaha Soomaaliya ayaa aaminsan in dabo-gal iyo xaqiijin lagu sameeyo tirade dhabta ah ee deynta Soomaaliya lagu leeyahay halkii laga ogolaan lahaa. Wuxuuna yiri sidatan “Madaxdeenu waxay ku leeyihiin waa ogolnahay deynta, maxaad u ogolaateen? Ma daba gasheen oo ma raad raac aad sameyseen, masoo hubiseen in waxaan nagula leeyahay iyo in kale”.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in markii xilka loo magacaabayey uu ugu yimid Qasnada dowladda oo maran.
“Waxaan ugu nimid halkan oo aan anigu Ra’isul Wasaare ka noqday, iyadoo akoonka Dowladda aanay lacag ku jirin”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo hadalkan ka sheegay munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumadda. Balse, wasiirkii hore Maaliyadda ee Xukuumaddii hore Mudane Maxamed Aadan Fargeeti ayaa sheegay in markii uu xilka wareejinayay ay ugu tageen Qasnada dowladda in ka badan 5-milyan oo dollar, isaga oo raaciyey in ay ogaayeen Bankiga Dhexe iyo Hanti dhowrka, hadii loo baahdana cadeymo ay soo bandhigi doonnaan.
Wasaaradda Maaliyadda ayaa sanadka 2018-ka u qoondeesay raasumaalka lacag oo dhan $14,458,464 oo Doolar ah, waxa ayna shaacisay in kharashka kaydka lama filaanka ah kaliya loo istcmaali karo xaaladaha deg dega ah sida fatahaado, abaaro, cuduro dilaacay ama kharashaad kale aan muuqan kolkii miisaaniyadda la diyaarinaayey. Maxamed Cabdirisaaq oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga dhaqaalaha kana faallooda arimaha Soomaaliya, ayaa Kalfadhi u sheegay in Soomaaliya wakhti xaadirkan aysan laheyn wax soo-saar ay dowladda dakhli ku keydsan karto, keydka dowladda u xareysana uu yahay mid ku saleysan canshuurta gudaha iyo deeqaha dibadda taa oo ka duwan nidaamka caalamku wax ku keydsado.
“Inta badan bisha ugu horeyso ee sanadka, keydka Dowladda wax lacag ah kuma jirto ama lacag yar ayaa ku jirta taa oo lagu dhiso miisaaniyadda la qorshenayo sanadkaa” ayuu yiri Maxamed Candirisaakh oo wareysi siinayey Kalfadhi.
Wasiirka Maaliyadda ayaa sidoo kale sheegay in wasaaradda maaliyadda ay wax weyn ka badashay mushaarka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda iyo ciidamada.
“Waxaa xusid mudan maanta oo siddeed bilood halkan joognay, in qof kasta oo dowladda u shaqeeyaa uu mushaaradiisa qaatay. Talo galkanu yahay, in ay noqon doonto 12-kii billood ee ugu horeeyay intaan dib u soo noqonay ee dowladda dib u dhisneyd in qof walbo dalkan ka shaqeeya xaq u leh in uu mushaarkiisa qaato”.
Warbixin uu website-ka Ivar Strand ku daabacay bogga ‘Abyrint’ ayuu ku sheegay in sanadka 2017-da uu ahaa markii ugu horeysay ee mushaaraadka shaqaalaha dowladda loo bixiyo si dhameystiran. Maxamed Mukhtaar oo ah aqoon-yahan oddorasa arimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka ayaa Kalfadhi u sheegay in wasaarada Maaliyadda ay wax weyn ka badashay nidaamyadii hore ee wasaaraddu ku shaqeyn jirtay. Waxaana uu ku amaanay kordhinta Miisaaniyadda 2018-ka iyo bixinta mushaaraadka guud sanadkii ugu horeeyay ay hawlgasho.
Waxa uu sidoo kale sheegay inay mudan tahay in la isweydiiyo deynta shaqaalihii hore ay ku leeyihiin dowladda“ Kaliya muhiim ma ahan in la bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda ee xiligan jooga, waxaa sidoo kale haboon in la isweydiiyo sida laga yeelayo deynta shaqaalihii hore ay ku leeyihiin dowladda” ayuu yiri Maxamed Mukhtar oo u waramay Kalfadhi.
Marka la qiimeeyo waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda maaliyadda, waxa ay ku tallaabsatay isbedel muuqda balse aan la hubin sii socoshadiisa maadaama dalku aanu weli gaarin daah furnaan maaliyadeed oo dhab ah.
W/D: Axmed Maxamed Amin
Aqalka sare oo lacag ugu deeqay dadkii ay sameeyen Duufaanta